2021 PVC caagga lagu calaamadeeyo mashiinka samaynta mashiinka ipuchain mashiinka otomatiga ah | Dharka dharka dahabka ee wiilasha
ku beero maskaxda iyo indhaha mashiinka
Calaamadee Mashiinka Sameynta Si otomaatig ah
Mashiinka loo yaqaan 'desktop pet pvc sumadda'
Vertical pvc-ga ee mashiinka la diro
Mashiinka qarsoon ee muuqaalka ah
Khadka wax soo saarka otomaatiga oo buuxa
Mashiinka tooska ah ee tooska ah ee aragga
Mashiinka samaynta sumadda silicon
PVC calaamadaynta mashiinka taageerada
Foornada otomaatiga ah ee warshadaha
Maxaad u doorataa Wello?
Xalka & Xaaladaha
Mashiinka dejinta ee caqliga leh ee muuqaalka ah
Wax soo saarka jilicsan ee jilicsan
Kabaha kabaha kabaxa sare ee soosaarka sare
Galoofyada tpres-ka ah ee soosaarka caagga ah
Soosaarka dhiirrigelinta dhiirrigelinta
Mashiinka samaynta ku-sameynta cajaladda
Mashiinka samaynta cagta caagga
Mashiinka sanka ee lagu sameeyo samaynta
Mashiinka ugu caqliga badan ee mashiinka muuqaalka ah
Qalabka caqliga leh ee caqliga otomatiga otomaatiga ah
Mashiinka caqliga leh ee sawirka muuqaalka sawirka rinjiga sawirka
Tirtirka mashiinka tooska ah ee mashiinka tooska ah ee dahabka
Mashiinka tooska ah ee aragtida tooska ah ee daboolka mashiinka
Mashiinka caqliga badan ee muuqaalka ah | Xadhiga dhiirrigelinta
Qalabka sawirka dharka caqliga leh
Caddee Mashiinka Durda ee Currystal
Meelaha Mosaic ee Mashiinka Si otomaatig ah
Xaashiyaha Epoxy | Mashiinka Xukunka ee PUM
Dharku wuxuu laalaadaa mashiinka guryaha
Mashiinka guryaha epxy ah ee badhamada
Nadiifinta Qiimeynta Epoxy Council-ka Khayaanada KeyChain | Qadaadiic
Warshadaha elektiroonigga guryaha
Soo-saarista casriga ah waxay ka bilaabataa WElDO
Hogaamiyaha isbeddelka tikniyoolajiyadda aragtida caqliga leh
Muddo tobanaan sano ah oo khibrad warshadeed leh, WELDO waxay diiradda saareysaa mashiinnada si toos ah otomaatiga u siiya iyo mashiinnada midabaynta. Waxay ka gudubtay shahaadada nidaamka tayada ISO9001 waxayna leedahay tiro shatiyeedyo madax-bannaan oo aqooneed iyo xuquuq-dhowr barnaamijyo badan Shirkaddayadu waxay ka gudubtay shahaadada laba-jilicsan ee ganacsiga, heerka tiknoolajiyadda hadda iyo mugga iibka ayaa gaadhay heerka warshadaha adduunka.
Mashiinka xawaaraha sare ee mobilada Mobile
Codsiga: 1.ku habboonaanta noocyada kala duwan ee dareeraha, sida rinjiga dubista, epoxy resin AB xabagta, dhaldhalaalka, UV xabagta, silikoonka elektaroonigga ah, xabagta kristal, khad caag ah, khad bir ah, EMI kalkaaliyaha kondhamka, isku xirnaanta tabinta, koollada degdega ah, koollada tuurista, Jinka Alxan, saliid, xabag lacag ah, xabagta casaanka, koollada kaamerada, koollada kahortaga abaaraha, rinjiga hufan, wakiilka hagaajinta fur, cusbada PU, xabagta hoose / dhexe ee nafwaayaha, iwm. 2. waxaa lagu dabaqi karaa in lagu shubo walxaha dareeraha ah qalabka shaqada ee kala duwan, sida birta, balaastigga, xaabada, istiikarada iyo wixii la mid ah.
Weldo 5 midabo PVC / Silicon sumadda mashiinka mashiinka wax lagu kiciyo
Astaamaha: 1.Import file JPG soo dhoofinta barnaamijka softiweerka siinta barnaamijka. Isticmaalka barnaamijka kumbuyuutarka, softiweerku waa mid si muuqata u muuqda, ku habboon oo dhakhso leh. 3.Single nozzel ama biiyaha badan ayaa loo isticmaali karaa iyadoo loo eegayo wax soo saarka dhabta ah. Max 5 nozzles oo wada shaqeynaya si loo hagaajiyo wax soo saarka. 4.Up ilaa 8 batoonada toobiye ee barnaamijyada kaladuwan ee kala duwan, kuna habboon soosaarka habab badan. 5.Biigga barnaamijka kadib, waa lagu keydin karaa kumbuyuutarka oo si joogto ah ayuu u shaqeynayaa. Marka sheyga loo baahan yahay in la sameeyo waqtiga soo socda, barnaamijka si toos ah ayaa loogu yeeri karaa iyada oo aan la helin barnaamij labaad. 6.Dispensing laba wasakhda isku mar la function jagada caaryada. 7.Suit alaabada adag iyo qiimaha sare-daray PVC iyo waxyaabaha silicone. Wax soosaarka degdega ah, hal mishiin wuxuu u dhigmaa 3 ilaa 5 shaqsi shaqsi ah, oo si weyn u gaabin kara mudada bixinta. 9.Stably samayso alaabada PVC / silikoon, tayo sare leh, heerka cillad yar ， ayaa kaa caawin kara yareynta qiimaha. 10.Software-ka iyo qaliinka mashiinku waa fududahay in la barto ， ayaa kaa caawin kara in la gaabiyo waqtiga tababarka. 11.Barnaamijka barmaamijka: Dot, line, arc.
Weldo 12 midabo PVC / Silicon sumadda mashiinka mashiinka wax lagu kiciyo
Astaamaha: 1.Deejinta JPG ama DXF faylka barnaamijka softiweerka si loo siiyo barnaamijka fidinta wadada. Habka barnaamij debecsan, wuxuu macaamiisha u jeclaan karaa inuu doorto barnaamij garaafyada kombiyuutarka ah ama barnaamijyada wax ku baro sanduuqa 3.Single nozzel ama biiyaha badan ayaa loo isticmaali karaa iyadoo loo eegayo wax soo saarka dhabta ah. Max12 nozzles oo wada shaqeynaya si loo hagaajiyo wax soo saarka. 4.Up ilaa 8 batoonada toobiye ee barnaamijyada kaladuwan ee kala duwan, kuna habboon soosaarka habab badan. 5.Biigga barnaamijka kadib, waa lagu keydin karaa kumbuyuutarka oo si joogto ah ayuu u shaqeynayaa. Marka sheyga loo baahan yahay in la sameeyo waqtiga soo socda, barnaamijka si toos ah ayaa loogu yeeri karaa iyada oo aan la helin barnaamij labaad. 6.Dispensing laba wasakhda isku mar la function jagada caaryada. 7.Suit alaabada adag iyo qiimaha sare-daray PVC iyo waxyaabaha silicone. Wax soosaarka degdega ah, hal mishiin wuxuu u dhigmaa 3 ilaa 5 shaqsi shaqsi ah, oo si weyn u gaabin kara mudada bixinta. 9.Stably samayso alaabada PVC / silikoon, tayo sare leh, heerka cillad yar ， ayaa kaa caawin kara yareynta qiimaha. 10.Can ayaa lagu dari karaa robot-ka si uu u sameeyo khad toos ah oo wax soo saar toos ah, kaas oo si otomaatig ah u soo saari kara una yarayn kara kharashka shaqaalaha. 11.Software iyo qalliinka mashiinka waa fududahay in la barto ， ayaa kaa caawin kara in la gaabiyo waqtiga tababarka. 12.Barnaamijka barmaamijka: Dot, line, arc.
Weldo 18 midabo PVC / Silicon sumadda mashiinka mashiinka wax lagu kiciyo
Codsiga alaabta: Alaabada 1.Hift 2.Keychain, derin bar, koob coaster, Shandado tag, Kiiska wadaha qalinka, 3.Silicone mobile cae, silikoon saacad, curcurka silikoon, Qalabka taleefanka gacanta ee PVC, Furitaanka dhalada PVC. 4.zipper puller, calaamadda caagga ah, kabaha sare, xargaha iyo xirmooyinka loop 5.Shoes guud, Trip anticollision strip for galoofyada, kabaha kali
Tikniyoolajiyad wax soo saar si buuxda iswada, xoraynta shaqada, badbaadinta shaqada iyo hagaajinta waxtarka!
WELDO waxay bixisaa qalab fidiya xabagta tayo sare leh, xalal codsi teknoolojiyad casri ah oo shaqsiyeed si ay uga caawiso macaamiisha inay kordhiyaan dabacsanaanta ganacsiga, kobciyaan wax soo saarka wax soosaarka isla markaana ay gaaraan yoolalka waara, sameynta mashiinada otomaatiga ah iyo aaladaha oo kordhiya waxsoosaarka waxsoosaarka iyo xasiloonida wax soo saarka, bedelida qiimaha wax soo saarka iyo kordhinta faa'iidada.
Qalabka otomaatigga ee WELDO wuxuu siiyaa macaamiisha caalamka noocyada mashiinka wax lagu shubo iyo aaladaha wax lagu rito, badeecadeenna waxaa si ballaaran loogu adeegsadaa elektaroonigga, gawaarida, qalabka guryaha, qalabka kabaha lagu dhejiyo, istiikarka, mootooyinka, caag faleebo ah, calaamadaha qalabka, hadiyado dahab ah, Saacadaha, cuntada, golf, farshaxanka ciddiyaha, qalabka taleefanka gacanta, muraayadaha indhaha, iyo beero kale. Macaamiisha iskaashiga muddada-dheer waxaa ka mid ah Midea, Huawei, Gree, Skyworth, Haier, iyo shirkado kale oo Fortune 500 ah iyo tiro badan oo soosaara shirkado yaryar iyo kuwa dhexdhexaad ah.
Sumadda Production ee mashiinka xawaaraha sare
Sumadda soosaarida mashiinka xawaaraha sare leh
Mashiinka xawaaraha sare leh ee alaabada qaansoleyda sare leh
Mashiinka xawaaraha sare leh ee alaabada qaansoleyda dhalaalaya
Midabaynta daboolka mootada
WEIDO Midabee sumadda gaariga ee mashiinka xawaaraha sare leh
WELDO waxaa la aasaasay bishii Maarso 2007.
WELDO waa shirkad tiknoolaji ah oo diiradda saareysa cilmi baarista iyo horumarinta, wax soo saarka, iyo iibinta qalabka wax soo saarka otomaatiga ah ee loogu talagalay xakamaynta dareeraha, sida fidinta koollada otomaatiga ah, bixinta balaastigga, midabaynta, iyo walxaha irbadaha Qeybtayada ugu weyn oo ay ka mid yihiin mashiinka wax lagu shubo iyo aaladaha wax lagu rito, iwm.
Bixi tiknoolajiyad wax soo saar caqli sare leh oo wax soo saar leh, xirfadle ah, qumman, iibinta waqtigeeda ku habboon, iibinta, adeegga iibka kadib, xalal codsi teknolojiyad shaqsiyeed cusub, soo saarida qalab casri ah oo casri ah.
Nala soo xiriir si aad u hesho xalal badan oo ganacsi
Nakhshadeynta iyo baaritaanka iyo soo saarista xalalka sirdoonka macmalka ah ee bixiya qiimaha ganacsi ee shirkadaha marka loo eego baahidooda.